Brian Castner ayaa wargeyska the New York Times ku qorey maqaal dheer uu uga hadlayo xaaladda Soomaaliya. Waxaa uu maqaalkaasi cinwaan uga dhigay “dal dhan ayaa dab la qabadsiinayaa”. – Damqo
Brian Castner ayaa wargeyska the New York Times ku qorey maqaal dheer uu uga hadlayo xaaladda Soomaaliya. Waxaa uu maqaalkaasi cinwaan uga dhigay “dal dhan ayaa dab la qabadsiinayaa”.
Brian Castner ayaa wargeyska the New York Times ku qorey maqaal dheer uu uga hadlayo xaaladda Soomaaliya.
Previous Magaalada Doxa ee dalka Qatar oo Maanta Shir uga furmo Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC
Next Wasiir Maareeye ayaa sheegay in dowladda federaalka ay masuul ka tahay guud ahaan dalka, isagoo hadalkaan ka sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho. ( Dawo )